2020 ထိ LICENSE KEYS ပါတဲ့ Avira_Internet_Security_Suite_14.0.4.642 Software လိုချင်သူများအတွက်
Antivirus Software ကောင်းလေး ရလိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ License Key တွေ က Internet Security အတွက် ကော Premium အတွက်ပါ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Software ကရထားတာ တစ်ပတ်လောက်ရှိပြီး Connection တိုင်ပတ်နေတော့ အခုမှ တင်ဖြစ်တာဗျာ။ ညက Upload လုပ်ပေးသော Thiland ကညီငယ်လေးကို အထူးကျေဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ License Key အသုံးပြုပုံကို Download လုပ်ထားတဲ့ License key ဖိုင်ထဲ့ က
Read Me ဖိုင် လေးကို သေချာဖတ်ပြီး အသုံးပြုပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်စမ်းသုံးတာတော့အဆင်ပြေတယ်ခင်ဗျာ။
ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ 2020 ထိရတယ်နော်မိတ်ဆွေတို့ Instructions လေးကိုဒီမှာလဲ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။အဆင်ပြေပါစေဗျာ။
CHOOSE THE RIGHT FOLDERS, IS --&gt; Internet Security, Premium --&gt; Antivir Suite
2.Hover ur cursor to "Open With" And Click on "Antivir Licence Manager"
1.Open Avira Internet Security OR Avira Antivirus Suite 2014 Setup.
SKIP the very next step if installing AA.
Avira_Internet_Security_Suite License Download Now Labels: